Hopper Dredge Waxaa naqshadeeyay Ellicott oo Dhameystirtay Shaqada Wabiga Mississippi
Mareykanka: Qandaraaslaha Ciidanka Xoogga oo dhameystiraya Biyo-xireenka Jasiiradda Long Island ee ku-meel-gaarka ah Meesha u dhow Moriches Bay Reach
Paul Howard Construction wuxuu isticmaalayaa Ellicott® Brand 670 dredge mashruucan.
Ciidamada Mareykanka ee Qeybaha Injineerada ah, Degmada New York, qandaraaslaha wuxuu bilaabay wajigii labaad ee dayactirka qulqulka wadada Moriches Bay ee Wadada Wanaagsan ee Longway Intracoastal Waterway toddobaadkan. Paul Howard Construction, oo ka tirsan Greensboro, NC, ayaa la siiyay $ 1.45 milyan oo qandaraas ah si uu ugu sameeyo nabaad-dayactirka aagga Moriches Bay ee kanaalka illaa qoto dheer oo la oggol yahay oo ah cagaha 6.
Si loo habeeyo kheyraadka badda ee xasaasiga ah, mashruucan ayaa loo kala qaybiyey laba weji iyada oo labo abaabul oo kala gaar ah la sameeyay. Wejiga koowaad, oo diiradda saaraya meelaha ku yaal qaybta Moriches Bay ee aadka u daran, ayaa la dhammeystiray horaantii sanadkan gu'ga. Wejiga Labaad, wejiga u dambeeya, ayaa lagu dhammaystiri doonaa qaybta hore ee deyrta halka qashin-qaadku uu yahay mid deegaan ahaan suurta gal ah.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan dhameystirno qodaalka Moriches Bay Reach iyadoo la tixgelinayo labadaba baahiyaha amniga guud ee degdegga ah, iyadoo marka hore la qoynayo meelaha dhibaatada ugu daran ee guga, iyo baahida deegaanka ee deegaanka, anagoo shaqada u kala jabinayna laba waji si aan u meel dhigno qulqulka jiilaalka. iyo nolosha kale ee badda ee deegaanka ee bay'ada, "ayuu yiri Taliyaha Degmada New York Col. John R. Boulé. Ugu dambeyntiina, shaqadani waxay gacan ka geysan doontaa sidii loo heli lahaa marin aamin ah oo loogu talagalay doonyaha madadaalada ee gobolka iyo sidoo kale wada-hawlgalayaashayada Federaalka ee Ilaalada Xeebaha.
Qiyaastii ku dhawaad ​​35,000 dhudhun oo laba jibbaaran oo ciid ah wejiga labaad ayaa laga saari doonaa kanaalka waxaana lagu meelayn doonaa Xeebta u dhow Cupsogue. Dhamaan Khadka Tooska ah ee 'Long Island Intracoastal Waterway Federal Channel' waa xNUMX mayl waxayna ku baxdaa biyaha gudaha koonfureed ee Long Island iyada oo loo sii marayo Great South Bay, Bellport Bay, Narrow Bay, Moriches Bay, Quantuck Bay, iyo Shinnecock Bay.
Dayactirka Wadada dheer ee loo yaqaan 'Long Island Intracoastal Waterway' waxaa markii ugu dambeysay la qabtay Noofambar 2003 illaa Janaayo 2004. Isugeynta mugga walxaha la jeexjeexay ee laga saaray Shinnecock Bay Reach ee sanad maaliyadeedka 2004 waxay ahayd 26,085 yaardi oo kubadi ah sheyga. Intaa ka hor, gaarista Moriches Bay waxaa loo laayay sanad maaliyadeedka 2003 iyada oo meesha laga saaray xNUMX yaardi oo maadi ah oo alaab ah.
Degmada New York waxay mas'uul ka tahay Corps of Engineers 'horumarinta ilaha biyaha, hagista, iyo howlaha sharciyeynta ee waqooyi-bari New Jersey, bariga iyo koonfurta-bartamaha New York, oo ay kujirto New York
Harbor iyo Long Island, iyo qaybo ka mid ah Vermont, Massachusetts, iyo Connecticut. Degmadu waxay sidoo kale mas'uul ka tahay qaabeynta iyo dhisidda xarumo ciidan iyo cirka oo lagu rakibo New Jersey, New York, Virginia iyo dibedda Greenland.
Ku bilow mashruuca dayactirka kanaalkaaga Ellicott